Maxaad Samsung TV ma ciyaari karo Qaabka Video ah?
Sidaas, waxaad ku iibsaday ah Samsung Smart TV iyo doonayaa inaan ciyaaro videos ka your computer isticmaalkiisa. Markaas waxaad tahay meeshii saxda ah, sida aynu la sheegaya doonaa sida aad u gaaro in talaabooyin fudud oo si sahlan. Eeg tilmaan gaaban in aan idiinka Yeellay Sharciga.
Sida loo isticmaalo Samsung TV inuu u ciyaaro videos ka computer
Samsung Smart TV kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto aad videos iyo faylasha kale warbaahinta ka badan network WiFi a si fudud oo waa DLNA waafaqsaneyn. All in aad sameyso waa in aad isticmaasho app All Share in uu yimaado waa la hidi iyo sidoo kale in la hubiyo in aad computer loo qaybiyay sida server DLNA ah.
Talaabada 1: haggaaji your computer sida server DLNA ah
• Fur Bar ah Suuradwacnaantu (Windows 8) ka dibna Settings
• Hit on icon WiFi ah
• Raadi network WiFi iyo xaq guji ku yaal
• Dooro ikhtiyaarka 'sii jeesan Sharing On iyo Off'
• On shaashadda soo socda, doorato "Haa ... 'si ay awood qaybsiga iyo isku xiro dhammaan aaladaha socon
Talaabada 2: Isticmaal Samsung TV si ay u helaan tusmada video ah on your computer
• Switch on your Samsung TV haatan
• Riix badhanka Smart Hub
• Burcad Play app All Share ka
• Laga soo bilaabo app ee suuqa kala muhiimsan ee, dooro Videos qaybta ka dibna mid ka mid ah aad rabto in aad ka ciyaaro
Samsung TV taageeray qaabab video
Your TV Samsung sida caadiga ah la Timaadda buug qeexaya qaabab video kala duwan in ay si kastaba ha ahaatee waxay kugu taageeri kartaa; guud ahaan telefishin Samsung ku taageeri karaan qaababkan soo socda oo aan wax arimo ah.
avi / mp4 / Mpg / vro / vob / DivX / XviD / MPEG2 / MPEG4
Sida aad arki karto, Samsung TV taageeri kartaa oo kaliya sacab muggiis oo ah qaabab video natively. Markaas waxa aad samayn lahayd oo aad mkv iyo faylasha kale karin, sida aad iyaga u ciyaari lahaa on your Samsung TV? Waxaan halkaan u joognaa in aad war wanaagsan in haatan waxaad ka ciyaari kartaa dhammaan qaabab video isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate - mid ka mid ah ugu wanaagsan ee converters video iyo streamers halkaas. Waxaa u bedeli karaan oo keliya ma aad videos in ka badan 150 qaabab iyo taageero 4K UHD laakiin sidoo kale si toos ah u sii qulquli karaan videos ka your computer si aad Samsung Smart TV. Your computer iyo TV waa in lagugu xiro shabakad isku mid ah waxaa ay u shaqeeyaan.
Taageero kasta oo video maqal iyo qaabab.
U beddelaan qalabka la presets filaayo in si fudud loo maqli karo.
Edit video sida barnaamij video tafatirka xirfadeed.
Qabtaan heerka diinta ugu dhaqsiyaha badan, 30X xawaaraha dhaqso
Diinta sameecadda ah - ma tayada wax soo saarka khasaaro.
OS taageerayaan: Windows NT4 / 2000/2003 / XP / Vista / 7/8, Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Sida loo isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo videos for aad TV Samsung
Talaabada 1: Marka aad ku xiran your computer iyo TV Samsung shabakad isku mid ah, waa in si toos ah loo ogaado qalab Video Converter Ultimate geeyo, kuwaas oo lagu soo bandhigi doonaa hoos tab Stream dhinaca bidixda ka app uu furmo suuqa ugu weyn.
Talaabada 2: Dooro tab loogu badalo ka furmo suuqa ugu weyn markaasna ku dar video files aad jeceshahay Diinta Islaamka ka baxayaan aad TV Samsung. Fiiro u yeelo in Wondershare kuu ogolaanayaa inaad jiid jeedi video files on inay Converter Tab ah. Haddaba, xulo faylka aad jeclaan lahayd in ay u badalaan iyo sidoo kale qalab geeyo ka. Markaas, guji badhanka Stream dhinaca hoose gacantiisa midig ah.
Talaabada 3: Haddaba, xulo tab Download ka interface ugu weyn oo uu aado qaybta u dhammeeyey. Si aad u billowdo ciyaaro ee la gediyay video files, aad si fudud u leeyihiin in ay wax miiran on WiFi ah / Play on icon TV siiyo dhinaca gacanta midigta ee file video kasta.
Sida loo Download, rakib, uninstall iyo Update Samsung Kies Mac
2 Easy Siyaabaha kaabta Galaxy Nexus
Samsung Video Editor: Sida loo Edit Samsung Video ku saabsan PC
> Resource > Samsung > Maxaad Samsung TV ma ciyaari karo Qaabka Video ah?